Nso egwuregwu ndị ụfọdụ na-acha ọcha na-egwu? Mgbe ụfọdụ, anaghị m aghọta ndị ọcha "Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ịga njem na Africa ruo ọtụtụ puku kilomita iji mụta nwatakịrị wee weta n'ubi owu maka foto ohere? "
Site na: Admi1na: November 3, 2018 00: 20 Enweghị asịsa
Ọ bụghị ihe nzuzu ịkwụ ụgwọ maka okomoko dị otú ahụ?
Kedu egwu ha na-egwu n'ikpeazụ?
Amaghị m ma ọ bụrụ na ndị a maara nke ọma na ụfọdụ ihe agaghị emeli ma kwesịghị ime ọzọ. Et la pauvre petite, toute souriante … "Anyị ga-ahụ ihe niile dị ọcha. »
Ọkt30 05: 15